ငွေစက္ကူ များတွင် ဗိုလ်ချုပ်ပုံ အပြင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ နှင့် ပြည်ထောင်စု ကိုယ်စားပြုများ ထည့်သွင်းရန် KNC ထုတ်ပြန် – Zartiman
ငွေစက္ကူ များတွင် ဗိုလ်ချုပ်ပုံ အပြင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ နှင့် ပြည်ထောင်စု ကိုယ်စားပြုများ ထည့်သွင်းရန် KNC ထုတ်ပြန်
ပြည်ထောင်စုသားအချင်းချက်း အတူတကွ အေးအတူ ပူအမျှ နေထိုင်လာခဲ့သည်ဆိုလျှင်အဘယ်ကြောင့် ပြည်နယ်နေ ကျန်လူမျိုးရစု၏ အမျိုးသားခေါင်ူဆောင်များနှင့် အမျိုးသားလက္ခဏာများ . ယဉ်ကျေးမှု ပုံရိပ်များ မထည့်ရသနည်းအလွန်မေးချင်စရာ ကောင်းသော မေးခွန်းပင်ဖြစ်ကြောင်း KNC က မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။ ဒုတိယအချက် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ပို၍ ဆိုးဝါးကြောင်း၊ ငွေစက္ကူ များ၏ ကျောဘက် စာမျက်နှာတွင်၁၉၄၄ ခုနှစ်ကတည်းက သုံးနှုန်းရေးသားခဲ့သော ” ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်။
ဆိုသောစကားရပ်အစား၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် စစ်အစိုးရလက်ထက်မှ စ၍ ပြည်ထောင်စု ဆိုသောစကားလုံးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဖြုတ် ပစ်ပြီး ” မြန်မာနိုင်ငံ တော် ဗဟိုဘဏ် ” ဟု ပြောင်းလဲရိုက်နှိပ်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင် စုသဘောကို ဖျောက်ဖျက်လိုသော ပုံသဏ္ဍန် ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း ၊ ထူးခြားသည်မှာစစ်အစိုးရဖြစ်၍ Defacto Government ဖြစ်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ဒီမိုကရေစီ အစိုးရနှင့် ဒီမိုက ရေစီ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ထူထောင်သွားမည်ဟု ကတိပေးထားသည့် NLD အစိုးရကိုယ်တိုင်
၎င်းလက်ထက်တွင် ထုတ်ဝေသည့် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် ( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ရက်နေ့ထုတ် ) နှင့် ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ထုတ်ဝေမည့် ကျပ်၅၀၀ တန်တို့တွင်လည်း စစ်အစိုးရ၏ အသုံးအနှုန်း ” မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ” ဟုသာ ဆက်လက် သုံးစွဲ ထားသည် ကို အံ့အားသင့်ဖွယ် တွေ့ရှိရကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြထားသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သုံးစွဲ ရမည်ကို မည်သည့်အ တွက် ကြောင့် မသုံးစွဲသနည်းဟုလည်း ကောင်း၊၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ၏ နိုင်ငံတော်အခြေခံမူအခန်း၁ ပုဒ်မ ၂တွင်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဟု ခေါ်တွင်ရမည်ဟု ပြဌါန်းချက်နှင့် ဆန့်ကျင်နေသလားဟုလည်းကောင်း မေးခွန်း ထုတ်လိုက် သည်။ KNC ၏ အကြံပြုချက်တွင် ဖော်ပြပါ အကြံ့ပုချက် ၂ ချက်အပြင် အခြားပြည်နယ်၆ပြည်နယ်မှ လူမျိုးစုများလည်း မိမိတို့ပြည် ထောင်စုအတွင်း လှည်လည်သုံးစွဲနေသော ငွေကြေး၏ ဝိသေသန ပုံရိပ်သည် အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသောကြောင့် အထူးဂရုပြု စဉ်းစား သင့်ကြောင်း ၊ KNC ၏ တိုက်တွန်းချက်များကိုလည်း ပြည်ထောင်စုအရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရပြည့်ဝရေး၊
ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကဏ္ဍများ အတွက်အထူးပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြ တိုက် တွန်းထားသည်။ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီKNC က ငွေစက္ကူများတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ အပြင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ နှင့် ပြည်ထောင်စု ကိုယ်စားပြု သင်္ကေတများ ထည့်သွင်းရန်အတွက် အကြံပြုထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ လူမှုကွန် ရက်တွင် တရားဝင် ထုတ်ပြန် သော KNC ၏ တောင်းဆိုချက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ် ဒုဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးစိုးမင်းက
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လည့်ပတ် သုံးစွဲ နေသော ငွေစက္ကူ အမျိုးအစား ၁၄ မျိုးလုံးတွင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံများအား လာမည့်နှစ်များအတွင်းရိုက်နှိပ်ထုတ် ဝေသွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ အ စိုးလက် ထက်တွင်မြန်မာငွေစက္ကူများရိုက်နှိပ်သုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံများနှင့် ထုတ်ဝေသုံးစွဲရန် ကြိုး ပမ်းမှု ရှိခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန္နဝါရီ လ ၄ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေသည့် ကျပ်၁၀၀၀ တန်ငွေစက္ကူ နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လတွင်။
ထုတ်ဝေမည့် ကျပ်၅၀၀တန်ငွေစက္ကူများအဖြစ် ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံများဖြင့် ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေမည့် ကိစ္စသည် ဖြစ်သင့်သောကိစ္စဖြစ်သဖြင့် ကြိုဆို ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။KNC ထောက်ပြရာတွင် စဉ်းစားသင့်သည့်အချက် ၂ရပ် ထောက်ပြလိုက်ပြီး ပထမအချက်အနေဖြင့် ငွေ စက္ကူ၏ အဓိက မျက်နှာစာတွင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ပုံ တစ်ခုတည်း ငွေစက္ကူ အမျိုးအစား ၁၄မျိုးလုံးတွင် သုံးတော့မည်လော၊
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော လူမျိုးစုကြီး ၈စု ဖြစ်သော ကချင်၊ ကယား ၊ကရင် ၊ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း တို့ ၏ ထင်ရှား ကျော်ကြားသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ မထည့်တော့ပြီလော ဟု မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။ မြန်မာငွေစက္ကူ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေသည့် သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်လျှင် ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးသားလက္ခဏာ များသာ ဥပမာအားဖြင့် –၁၉၄၄- ၁၉၄၅ ကာလ များတွင် ဒေါင်းရုပ်ပုံနှင့် မန္တလေး နန်းတော်ပုံ၊ ၁၉၆၅- ၁၉၇၁ ကာလအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံများနှင့် အင်းလေးကန် , လယ်သမားနှင့်နွား ,
မိန်းမပျိုလေး ရက်ကန်း ရက်နေပုံ, လယ်ထွန်စက်ပုံ ၊ ၁၉၇၂ – ၁၉၈၇ ကာလအတွက် မျက်နှာစာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း , သခင်ဖိုးလှ ကြီး , ဆရာစံ ၊နောက်ကျောစာမျက်နှာများတွင် ပ ဉ္စရူပရုပ် , နတ်သားရုပ် ,ရေနံမြေ လုပ်သားရုပ်, လောက နတ်ရုပ် , လယ်သမားနဲ့ နွား လှည်း , စောင်းကောက် ပုံ၊ ၁၉၈၉ – ၂၀၂၀ ကာလများ တွင် မျက်နှာစာများတွင် ကနဦးပိုင်းကာလငွေစက္ကူ အသေးများတွင် စောင်း ကောက်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ နောက်ပိုင်းကာလငွေ စက္ကူ အကြီးများ၅၀၀၀တန်ကို ဆင်ရုပ်နှင့် ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းတွင်။
ငွေစက္ကူ အမျိုးအစား ၁၀၀၀ ကျပ်အထိ ခြင်္သေ့ ရုပ်များဖြင့် လဲလှယ်ဖေါ်ပြခဲ့ကြောင်း၊ ကျပ် ၁၀၀၀၀ တန်ကိုမူ မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ဖြင့် ရိုက် နှိပ်ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ကျောစာမျက်နှာများတွင်မူကရဝိတ်ပုံ , ခြင်းခတ်နေပုံ , ကန်တော်ကြီးတွင် လှေလှော်နေပုံ , ပြည်သူ့ဥယျာဉ်နှင့် ဆင် ရေပန်းပုံ ,မြန်မာ့ယွန်းအစ်ပုံ , သစ်ဆွဲဆင်ပုံ , မဟာဗန္ဓုလပုံ , ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန် ဝန်ကြီးဌါနပုံ , ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပုံ , မန္တလေး နန်းတော်မုဒ်ဦးပုံ စသည်ဖြင့် လေ့လာသိရှိရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
KNU က သုံးသပ်ချက်အနေဖြင့် ၁၉၄၄ ခုနှစ်မှ စ၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ယနေ့ခေတ်အထိ မျက်နှာစာများတွင်လည်းကောင်း နောက်ဘက်စာ မျက်နှာတွင်လည်ူကောင်း ပြည်ထောင်စုဝင် ပြည်နယ် ၇ခု နှင့် ပတ်သက် သည်မှာ၁၉၆၅ ခုနှစ်ထုတ် ၁ကျပ်တန်ကျောဘက်တွင် အင်း လေးကန်ပုံ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ထုတ် ၂၀၀ ကျပ်တန်ကျောဘက်တွင် သစ်ဆွဲဆင်ပုံ၊၂၀၀၉ ခုနှစ်ထုတ် ကျပ်၅၀၀၀ တန်ကျောဘက် ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်ပုံ၊ ထို၃မျိုးတွင်သာ ရှားရှားပါးပါးတွေ့ရပြီးပြည်နယ် လူမျိုးစုစစ်စစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းကို၁၉၆၅ ခုနှစ်ထုတ်၁ကျပ် တန်တွင်သာ တွေ့ရှိ ရသည်မှာ မငြင်းနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
Ref ; KNC / Khit Thit Media
ငှစေက်ကူ မြားတှငျ ဗိုလျခြုပျပုံ အပွငျ တိုငျးရငျးသား ခေါငျးဆောငျမြား နှငျ့ ပွညျထောငျစု ကိုယျစားပွုမြား ထညျ့သှငျးရနျ KNC ထုတျပွနျ
ပွညျထောငျစုသားအခငျြးခကျြး အတူတကှ အေးအတူ ပူအမြှ နထေိုငျလာခဲ့သညျဆိုလြှငျအဘယျကွောငျ့ ပွညျနယျနေ ကနျြလူမြိုးရစု၏ အမြိုးသားခေါငျူဆောငျမြားနှငျ့ အမြိုးသားလက်ခဏာမြား . ယဉျကြေးမှု ပုံရိပျမြား မထညျ့ရသနညျးအလှနျမေးခငျြစရာ ကောငျးသော မေးခှနျးပငျဖွဈကွောငျး KNC က မေးခှနျးထုတျထားသညျ။ ဒုတိယအခကျြ အနဖွေငျ့ နိုငျငံရေးရှုထောငျ့မှကွညျ့လြှငျ ပို၍ ဆိုးဝါးကွောငျး၊ ငှစေက်ကူ မြား၏ ကြောဘကျ စာမကျြနှာတှငျ၁၉၄၄ ခုနှဈကတညျးက သုံးနှုနျးရေးသားခဲ့သော ” ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံ ဗဟိုဘဏျ။
ဆိုသောစကားရပျအစား၁၉၉၀ ပွညျ့နှဈ စဈအစိုးရလကျထကျမှ စ၍ ပွညျထောငျစု ဆိုသောစကားလုံးကို ပွောငျပွောငျတငျးတငျး ဖွုတျ ပဈပွီး ” မွနျမာနိုငျငံ တျော ဗဟိုဘဏျ ” ဟု ပွောငျးလဲရိုကျနှိပျခဲ့ပွီး ပွညျထောငျ စုသဘောကို ဖြောကျဖကျြလိုသော ပုံသဏ်ဍနျ ပွုလုပျခဲ့ ကွောငျး ၊ ထူးခွားသညျမှာစဈအစိုးရဖွဈ၍ Defacto Government ဖွဈ၍ ဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးဖွဈသျောလညျး ဒီမိုကရစေီ အစိုးရနှငျ့ ဒီမိုက ရစေီ ဖကျဒရယျစနဈကို ထူထောငျသှားမညျဟု ကတိပေးထားသညျ့ NLD အစိုးရကိုယျတိုငျ
၎င်းငျးလကျထကျတှငျ ထုတျဝသေညျ့ ကပျြ ၁၀၀၀ တနျ ( ၂၀၂၀ ပွညျနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၄ရကျနထေု့တျ ) နှငျ့ ဇူလိုငျလ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈတှငျ ထုတျဝမေညျ့ ကပျြ၅၀၀ တနျတို့တှငျလညျး စဈအစိုးရ၏ အသုံးအနှုနျး ” မွနျမာနိုငျငံတျောဗဟိုဘဏျ ” ဟုသာ ဆကျလကျ သုံးစှဲ ထားသညျ ကို အံ့အားသငျ့ဖှယျ တှရှေိ့ရကွောငျး သုံးသပျတငျပွထားသညျ။ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံတျော ဗဟိုဘဏျသုံးစှဲ ရမညျကို မညျသညျ့အ တှကျ ကွောငျ့ မသုံးစှဲသနညျးဟုလညျး ကောငျး၊၂၀၀၈ အခွခေံဥပဒေ ၏ နိုငျငံတျောအခွခေံမူအခနျး၁ ပုဒျမ ၂တှငျ။
ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာ နိုငျငံတျောဟု ချေါတှငျရမညျဟု ပွဌါနျးခကျြနှငျ့ ဆနျ့ကငျြနသေလားဟုလညျးကောငျး မေးခှနျး ထုတျလိုကျ သညျ။ KNC ၏ အကွံပွုခကျြတှငျ ဖျောပွပါ အကွံ့ပုခကျြ ၂ ခကျြအပွငျ အခွားပွညျနယျ၆ပွညျနယျမှ လူမြိုးစုမြားလညျး မိမိတို့ပွညျ ထောငျစုအတှငျး လှညျလညျသုံးစှဲနသေော ငှကွေေး၏ ဝိသသေန ပုံရိပျသညျ အားလုံးနှငျ့ သကျဆိုငျပါသောကွောငျ့ အထူးဂရုပွု စဉျးစား သငျ့ကွောငျး ၊ KNC ၏ တိုကျတှနျးခကျြမြားကိုလညျး ပွညျထောငျစုအရေး၊ ဒီမိုကရစေီ အနှဈသာရပွညျ့ဝရေး၊
ဖကျဒရယျတညျဆောကျရေး၊ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးကဏ်ဍမြား အတှကျအထူးပွနျလညျသုံးသပျသငျ့ကွောငျးလညျး ဖျောပွ တိုကျ တှနျးထားသညျ။ကခငျြအမြိုးသားကှနျဂရကျပါတီKNC က ငှစေက်ကူမြားတှငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးပုံ အပွငျတိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျမြား နှငျ့ ပွညျထောငျစု ကိုယျစားပွု သင်ျကတေမြား ထညျ့သှငျးရနျအတှကျ အကွံပွုထုတျပွနျတောငျးဆိုလိုကျသညျ။ဇှနျလ ၂၂ ရကျနေ့ လူမှုကှနျ ရကျတှငျ တရားဝငျ ထုတျပွနျ သော KNC ၏ တောငျးဆိုခကျြတှငျမွနျမာနိုငျငံ ဗဟိုဘဏျ ဒုဥက်ကဌဖွဈသူ ဦးစိုးမငျးက
မွနျမာနိုငျငံ တှငျ လညျ့ပတျ သုံးစှဲ နသေော ငှစေက်ကူ အမြိုးအစား ၁၄ မြိုးလုံးတှငျ အမြိုးသားခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးပုံမြားအား လာမညျ့နှဈမြားအတှငျးရိုကျနှိပျထုတျ ဝသှေားတော့မညျဖွဈကွောငျး ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ဇှနျလ ၁၆ ရကျနတှေ့ငျ ပွောဆိုခဲ့ကွောငျး၊ ၂၀၁၅ အ စိုးလကျ ထကျတှငျမွနျမာငှစေက်ကူမြားရိုကျနှိပျသုံးစှဲရာတှငျ အမြိုးသားခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးပုံမြားနှငျ့ ထုတျဝသေုံးစှဲရနျ ကွိုး ပမျးမှု ရှိခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ဇန်နဝါရီ လ ၄ရကျနတှေ့ငျ ထုတျဝသေညျ့ ကပျြ၁၀၀၀ တနျငှစေက်ကူ နှငျ့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈဇူလိုငျလတှငျ။
ထုတျဝမေညျ့ ကပျြ၅၀၀တနျငှစေက်ကူမြားအဖွဈ ရှိလာမညျ ဖွဈကွောငျး၊အမြိုးသားခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးပုံမြားဖွငျ့ ရိုကျနှိပျ ထုတျဝမေညျ့ ကိစ်စသညျ ဖွဈသငျ့သောကိစ်စဖွဈသဖွငျ့ ကွိုဆို ကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။KNC ထောကျပွရာတှငျ စဉျးစားသငျ့သညျ့အခကျြ ၂ရပျ ထောကျပွလိုကျပွီး ပထမအခကျြအနဖွေငျ့ ငှေ စက်ကူ၏ အဓိက မကျြနှာစာတှငျ အမြိုးသားခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ရုပျပုံ တဈခုတညျး ငှစေက်ကူ အမြိုးအစား ၁၄မြိုးလုံးတှငျ သုံးတော့မညျလော၊
ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံတှငျ နထေိုငျသော လူမြိုးစုကွီး ၈စု ဖွဈသော ကခငျြ၊ ကယား ၊ကရငျ ၊ခငျြး၊ မှနျ၊ ရခိုငျ၊ ဗမာ၊ ရှမျး တို့ ၏ ထငျရှား ကြျောကွားသော နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျမြား မထညျ့တော့ပွီလော ဟု မေးခှနျးထုတျလိုကျသညျ။ မွနျမာငှစေက်ကူ ရိုကျနှိပျထုတျဝသေညျ့ သမိုငျးကို ပွနျကွညျ့လြှငျ ဗမာ့ယဉျကြေးမှုအမြိုးသားလက်ခဏာ မြားသာ ဥပမာအားဖွငျ့ –၁၉၄၄- ၁၉၄၅ ကာလ မြားတှငျ ဒေါငျးရုပျပုံနှငျ့ မန်တလေး နနျးတျောပုံ၊ ၁၉၆၅- ၁၉၇၁ ကာလအတှကျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးပုံမြားနှငျ့ အငျးလေးကနျ , လယျသမားနှငျ့နှား ,
မိနျးမပြိုလေး ရကျကနျး ရကျနပေုံ, လယျထှနျစကျပုံ ၊ ၁၉၇၂ – ၁၉၈၇ ကာလအတှကျ မကျြနှာစာတှငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး , သခငျဖိုးလှ ကွီး , ဆရာစံ ၊နောကျကြောစာမကျြနှာမြားတှငျ ပ ဉ်စရူပရုပျ , နတျသားရုပျ ,ရနေံမွေ လုပျသားရုပျ, လောက နတျရုပျ , လယျသမားနဲ့ နှား လှညျး , စောငျးကောကျ ပုံ၊ ၁၉၈၉ – ၂၀၂၀ ကာလမြား တှငျ မကျြနှာစာမြားတှငျ ကနဦးပိုငျးကာလငှစေက်ကူ အသေးမြားတှငျ စောငျး ကောကျနှငျ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးပုံ နောကျပိုငျးကာလငှေ စက်ကူ အကွီးမြား၅၀၀၀တနျကို ဆငျရုပျနှငျ့ ၁၉၉၀ နောကျပိုငျးတှငျ။
ငှစေက်ကူ အမြိုးအစား ၁၀၀၀ ကပျြအထိ ခွင်ျသေ့ ရုပျမြားဖွငျ့ လဲလှယျဖျေါပွခဲ့ကွောငျး၊ ကပျြ ၁၀၀၀၀ တနျကိုမူ မွနျမာနိုငျငံ တံဆိပျဖွငျ့ ရိုကျ နှိပျခဲ့ကွောငျး၊ နောကျကြောစာမကျြနှာမြားတှငျမူကရဝိတျပုံ , ခွငျးခတျနပေုံ , ကနျတျောကွီးတှငျ လှလှေျောနပေုံ , ပွညျသူ့ဥယြာဉျနှငျ့ ဆငျ ရပေနျးပုံ ,မွနျမာ့ယှနျးအဈပုံ , သဈဆှဲဆငျပုံ , မဟာဗန်ဓုလပုံ , ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့အခှနျ ဝနျကွီးဌါနပုံ , ပွညျထောငျစုလှတျတျောပုံ , မန်တလေး နနျးတျောမုဒျဦးပုံ စသညျဖွငျ့ လလေ့ာသိရှိရကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။
KNU က သုံးသပျခကျြအနဖွေငျ့ ၁၉၄၄ ခုနှဈမှ စ၍ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈယနခေ့တျေအထိ မကျြနှာစာမြားတှငျလညျးကောငျး နောကျဘကျစာ မကျြနှာတှငျလညျူကောငျး ပွညျထောငျစုဝငျ ပွညျနယျ ၇ခု နှငျ့ ပတျသကျ သညျမှာ၁၉၆၅ ခုနှဈထုတျ ၁ကပျြတနျကြောဘကျတှငျ အငျး လေးကနျပုံ၊ ၁၉၉၀ ခုနှဈထုတျ ၂၀၀ ကပျြတနျကြောဘကျတှငျ သဈဆှဲဆငျပုံ၊၂၀၀၉ ခုနှဈထုတျ ကပျြ၅၀၀၀ တနျကြောဘကျ ပွညျထောငျ စုလှတျတျောပုံ၊ ထို၃မြိုးတှငျသာ ရှားရှားပါးပါးတှရေ့ပွီးပွညျနယျ လူမြိုးစုစဈစဈနှငျ့ တိုကျရိုကျပတျသကျခွငျးကို၁၉၆၅ ခုနှဈထုတျ၁ကပျြ တနျတှငျသာ တှရှေိ့ ရသညျမှာ မငွငျးနိုငျကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။